မိန်းမတွေဖောက်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်များက သင့်ကို ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်စေပါမယ် – Gentleman Magazine
မိန်းမတွေဖောက်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်များက သင့်ကို ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်စေပါမယ်
လူတွေပြောပြောနေတာ ယောက်ျားတွေက သစ္စာ မရှိဘူး၊ ဆော်တကာ နဲ့ပတ်အိပ်ချင်နေတယ် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတွေပါ။ မိန်းမတွေ လိင်ကိစ္စကြောင့် ဖောက်ပြန်တာနည်းပြီး . သူတို့လိုချင်တာက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာရှိမယ့်ယောက်ျား နဲ့ သူတို့ ဘ၀ဖူလုံမှုရှိအောင် ပူပန်စရာမရှိအောင်ထားနိုင်တဲ့ ယောက်ျား လုို့ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကောလဟာလ သက်သက်တွေပါ။ ခုတလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ယောက်ျားလေး တွေပဲ နှိပ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေ ဘယ်သူတွေသွားနေတယ်ထင်သလဲ။ ဘာတွေသွားပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်ထင်သလဲ။ ဖောက်ပြန်တာ မိန်းမ . ယောက်ျားမရွေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မိန်းမတွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ကွဲပြားနေပါတယ်။ ခုဒီတစ်ခါ မိန်းမတွေ ဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်လဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Gary Neuman ရဲ့ The Truth about Cheating စာအုပ်ထဲက လေ့လာမှု တစ်ခုရဲ့ အဖြေ အရ …
မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားတွေထက် လိင်ဆက်ဆံတာကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ မိန်းမတွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်နည်းပါးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုထဲ ကဖောက်ပြန်သူတွေက သူတို့ရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ တစ်လကို ၅ ကြိမ်နှင့်အောက် ပဲ ချစ်စခန်းဝင်ပြီး ဖောက်ပြန်မှု မရှိတဲ့ လူတွေ က တစ်လကို ၁၀ ကြိမ်ထက် မနဲ ချစ်စခန်းဝင်ပါတယ်။
ဖောက်ပြန်ရခြင်းရဲ့နောက်ထပ် အကြောင်းတရားတစ်ခု က စကားအပြောအဆိုနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မိန်းမတွေ က ခင်ပွန်းနဲ့ တစ်နေ့ကို ၃၀ မိနစ်ထက် မနည်း စကားစမည် ပြောလေ့ရှိပြီး ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမတွေ က သူတို့ခင်ပွန်းနဲ့ တစ်ရက် ကို ၅ မိနစ်နဲ့အောက် လောက်ပဲ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအကြောင်းကတော့ ပျော်ရွင်မှု မရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်မှု ကို အိမ်ထောင်အပြင်မှာရှာတဲ့သဘောပါ။ လေ့လာမှုအရ ၃၄% သောမိန်းမများဟာ ပျော်ရွှင်နေသော်လည်း ဖောက်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၅၄% သော ဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားများ ဟာ လက်ရှိအိမ်ထောင်နဲ့ သာယာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားတွေ ပျော်ပျော် မပျော်ပျော် ပိုဖောက်ပြန်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက် အနေနဲ့ အောင်မြင်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ မိန်းမများဟာ ၀င်ငွေ နည်းသောမိန်းမများထက် ပို၍ဖောက်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်က အိမ်ရှင်မများနှင့် မတူပဲ ခုခေတ်က လင်ရော မယားပါစီးပွားထွက်ရှာ ရတော့ မိန်းမများ ဟာတခြားသော ယောက်ျားများနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြုံတွေ့ မှုတွေရှိလာပါတယ်။ အလုပ်အောင်မြင်သောအခါ မှာ အပြင်မှာ သွားလာ လှုပ်ရှားတာများပြီး အခြားသောသူနှင့် အနေနီးရင်းနဲ့လည်းဖောက်ပြန်ကြပါတယ်။
ခြုံပြောရရင် မိန်းမတွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းတွေက ရာဂစိတ် ကျေနပ်မှုမရှိတာ၊ လင်မယားကြား စကားသိပ်မပြောဖြစ်တာ၊ အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုမရှိတာ၊ လုပ်ငန်းခွင် မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒီတော့ လူအို ကြီးများ ဒီနေ့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲသိပြီဟုတ် ။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး . . . ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ . . .
မိနျးမတှဖေောကျပွနျရတဲ့ အကွောငျးပွခကျြမြားက သငျ့ကို ပါးစပျဟောငျးလောငျးဖွဈစပေါမယျ
လူတှပွေောပွောနတော ယောကျြားတှကေ သစ်စာ မရှိဘူး၊ ဆျောတကာ နဲ့ပတျအိပျခငျြနတေယျ ဖောကျပွနျတယျဆိုတာတှပေါ။ မိနျးမတှေ လိငျကိစ်စကွောငျ့ ဖောကျပွနျတာနညျးပွီး . သူတို့လိုခငျြတာက ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာရှိမယျ့ယောကျြား နဲ့ သူတို့ ဘဝဖူလုံမှုရှိအောငျ ပူပနျစရာမရှိအောငျထားနိုငျတဲ့ ယောကျြား လုို့ပွောနကွေပါတယျ။ ဒါတှဟော ကောလဟာလ သကျသကျတှပေါ။ ခုတလော ရပေနျးစားနတေဲ့ ယောကျြားလေး တှပေဲ နှိပျတဲ့ အနှိပျခနျးတှေ ဘယျသူတှသှေားနတေယျထငျသလဲ။ ဘာတှသှေားပွီး ဘာတှလေုပျနတေယျထငျသလဲ။ ဖောကျပွနျတာ မိနျးမ . ယောကျြားမရှေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ယောကျြားတှေ ဖောကျပွနျရတဲ့ အကွောငျးနဲ့ မိနျးမတှေ ဖောကျပွနျရတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ ကှဲပွားနပေါတယျ။ ခုဒီတဈခါ မိနျးမတှေ ဘာကွောငျ့ဖောကျပွနျလဲ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
M. Gary Neuman ရဲ့ The Truth about Cheating စာအုပျထဲက လလေ့ာမှု တဈခုရဲ့ အဖွေ အရ …
မိနျးမတှဟော ယောကျြားတှထေကျ လိငျဆကျဆံတာကို ပိုသဘောကပြါတယျ။ မိနျးမတှေ ဖောကျပွနျရတဲ့ အဓိက အကွောငျးအရငျးက လိငျဆကျဆံမှု အကွိမျနညျးပါးလို့ဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာမှုထဲ ကဖောကျပွနျသူတှကေ သူတို့ရဲ့ ခငျပှနျးနဲ့ တဈလကို ၅ ကွိမျနှငျ့အောကျ ပဲ ခဈြစခနျးဝငျပွီး ဖောကျပွနျမှု မရှိတဲ့ လူတှေ က တဈလကို ၁၀ ကွိမျထကျ မနဲ ခဈြစခနျးဝငျပါတယျ။
ဖောကျပွနျရခွငျးရဲ့နောကျထပျ အကွောငျးတရားတဈခု က စကားအပွောအဆိုနညျးခွငျးဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျမိနျးမတှေ က ခငျပှနျးနဲ့ တဈနကေို့ ၃၀ မိနဈထကျ မနညျး စကားစမညျ ပွောလရှေိ့ပွီး ဖောကျပွနျတဲ့ မိနျးမတှေ က သူတို့ခငျပှနျးနဲ့ တဈရကျ ကို ၅ မိနဈနဲ့အောကျ လောကျပဲ စကားပွောဖွဈပါတယျ။
တတိယအကွောငျးကတော့ ပြျောရှငျမှု မရှိခွငျးဖွဈပွီး ပြျောရှငျမှု ကို အိမျထောငျအပွငျမှာရှာတဲ့သဘောပါ။ လလေ့ာမှုအရ ၃၄% သောမိနျးမမြားဟာ ပြျောရှငျနသေျောလညျး ဖောကျပွနျနိုငျပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ၅၄% သော ဖောကျပွနျတဲ့ယောကျြားမြား ဟာ လကျရှိအိမျထောငျနဲ့ သာယာနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယောကျြားတှေ ပြျောပြျော မပြျောပြျော ပိုဖောကျပွနျနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။
နောကျဆုံးအခကျြ အနနေဲ့ အောငျမွငျပွီး ဝငျငှကေောငျးတဲ့ မိနျးမမြားဟာ ၀ငျငှေ နညျးသောမိနျးမမြားထကျ ပို၍ဖောကျပွနျနိုငျပါတယျ။ အရငျခတျေက အိမျရှငျမမြားနှငျ့ မတူပဲ ခုခတျေက လငျရော မယားပါစီးပှားထှကျရှာ ရတော့ မိနျးမမြား ဟာတခွားသော ယောကျြားမြားနဲ့ လုပျငနျးခှငျမှာ ကွုံတှေ့ မှုတှရှေိလာပါတယျ။ အလုပျအောငျမွငျသောအခါ မှာ အပွငျမှာ သှားလာ လှုပျရှားတာမြားပွီး အခွားသောသူနှငျ့ အနနေီးရငျးနဲ့လညျးဖောကျပွနျကွပါတယျ။
ခွုံပွောရရငျ မိနျးမတှေ ဖောကျပွနျရတဲ့ အကွောငျးတှကေ ရာဂစိတျ ကနြေပျမှုမရှိတာ၊ လငျမယားကွား စကားသိပျမပွောဖွဈတာ၊ အိမျထောငျရေးသာယာမှုမရှိတာ၊ လုပျငနျးခှငျ မှာ အောငျမွငျနတေဲ့ အခကျြတှပေါ။ ဒီတော့ လူအို ကွီးမြား ဒီနေ့ အိမျပွနျရောကျရငျ ဘာလုပျရမလဲသိပွီဟုတျ ။
မိနျးကလေးတိုငျး တောငျ့တပွီး . . . ယောကျြားလေးတိုငျး အားကစြဖေို့ . . .
Previous: ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့နေတဲ့ အချိန် လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ
Next: မ်ိန်းမ ပိုးနည်း ၁ဝ နည်း